Avira antivir premium9online update အဆင်မပြေလို. — MYSTERY ZILLION
Avira antivir premium9online update အဆင်မပြေလို.
:OAvira antivir premium9update ကို Online ကနေဆွဲတာ update မဖြစ််ခင်ကိုပဲ updatebox ကလေးကပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗျ Offline update file ကိုဆွဲတော.လည်း ပထမတစ်ရက်(လုံး၀ update မလုပ်ရသေးခင်) အဲဒီ Offline update file နဲ.လုပ်တာအဆင်
ပြေသွားတယ်ဗျ နောက်သုံးရက်လောက်နေတော. တစ်ခါ Offlien update file ဆွဲပြီး update
လုပ်တော. အဆင်မပြေတော.ဘူး သူကလည်း Kasper လိုကြားထဲမှာရက်ကျော်သွားရင် weekly
file တို. cumul file တို.နဲ.ပြန်လုပ်ရသလိုမျိုးလားမသိဘူး Online update အဆင်ပြေရင်လည်း
တော်သေးတယ် ကျွန်တော်ကလည်းအခုမှ အဲဒီကောင်ကိုစမ်းသုံးကြည်.တာဆိုတော. ရွာလည်နေပြီဗျို.
အဲဟုတ်တယ်ဗျိုး။ လိမ်မလေးဆီမှာလည်း အဲလိုဖစ်နေတယ်တဲ့။ ပြောကြပါဦး ဘာလုပ်ရမှာလည်း။
လိပ်လိပ်ကိုယ်စား (ယနေ့ ညတွင် လိပ်မလေး အွန်းလိုင်းမတတ်နိုက်ပါ၍) :d:d:d
အင်း လိပ်လိပ် လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ MPT သမားတွေများလားမသိဘူး။ Connection ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Bagan NET ကသူတွေဖြစ်သလားလို့စုံစမ်းကြည့်ပါဦး။ နောက်တနည်းက proxy ထည့်ကြည်လိုက် ထင်တာပြောတာနော်
ကျွန်တော်ကတော့ တခါပဲ offline လုပ်လိုက်၇တယ်နောက် တခါအွန်လို်င်းကနေ တိုက်၇ုိက်သူဟာသူလုပ်နေတာပဲဗျ အဆင်ကိုပြေလို့
revo uninstall နဲ့ ဖြုတ်ပြီး အသစ်ပြန်တင်ကြည့်ပါ့လားဗျာ
ကျွန်တော်က kasper ၇ယ် avira ၇ယ် တွဲသုံးပါတယ် လောလောဆယ်တော့အဆင်ပြေနေတာပဲ
avira ကို ကိုယောင်စိန် ဆီကလို့ထင်တာပဲ ဗျာ မိုက်တယ် သူ့ကီးတွေက
အင်း လိပ်လိပ် လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ mpt သမားတွေများလားမသိဘူး။ connection ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ bagan net ကသူတွေဖြစ်သလားလို့စုံစမ်းကြည့်ပါဦး။ နောက်တနည်းက proxy ထည့်ကြည်လိုက် ထင်တာပြောတာနော် :d
ညသန်းခေါင်ကျော် ကွန်နက်ရှင်း ကောင်းလည်း ဖြစ်တာပဲ
အဲဒါနဲ့ အကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ် ဘာမှထပ်မထည့်တော့ဘူး
အခုမှပဲ စက်က ပေါ့သွားတယ် :d:d
connection ကတော့ နှစ်လိုင်းလုံးရှိတာပါ။
သူပါသူ update လုပ်နေတာပဲ ဘာမှလိုဘူး
game play နေရင် သူ့ကို ပိတ်ထားချင်စိတ်ပေါက်နေရော
သူက အမြဲ သုံးမိနစ်တစ်ခါလောက်တတ်တတ်လာလို့ :5::5::5:
အဲသလောက်ပေါတာနော် ... ဘာတွေလဲတော့သိ၀ူး :):)
Avira နဲ့ Deepfreeze
တွဲကစ်ထားတယ် အေးဆေးပဲ ..(ဘာမှမဖြစ်သေးခင်)
မအေးဆေးသေးဘူး အကိုရေ သုံးဖူးတဲ.သူများရှိရင် ပြောပေးကြပါဦး:106:
premium က expired ဖြစ်သွားပြီ.........update key လေးရှိရင်တင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ....:((
thihazaw wrote: »
ကူညီလက်စနဲ့ ဘယ်နေ၇ကနေ ကီးအသစ်ကိုထည့်၇မလဲဗျာ သူက extension တိုးဖို့ပဲပြောနေတယ်။